देवी | Nagarik News - Nepal Republic Media
मन्दिरबाट फर्किसकेको थिए। खोज्न गएको कुरा नभेटिएको महसुस भएको थियो। एकछिन कौसीमा टोलाए।
– मनमा अशान्ति हुँदा धेरै बेर घरमा बस्न सकिन।
– यसपालि मठ–मन्दिरले सजिएको ठाउँतिर जाने मन भएन।
–म गल्छीबाट भित्र पस्दै थिएँ।
– मानिसहरू सत्यता ओकल्दै थिए। मन्दिरमा भन्दा बढी भीड थियो।
–सहभागी हुनै लागेको थिए। बोतल बोले जस्तो महसुस भयो, पहिलाको दिन बिरर्सिएकै हो?
म झल्याँस्स भएँ। कसरी बिर्सने? म जुरुक्क उठे! कहाँ जाऊँ,के गरूँ? अन्तत घर फर्किदै थिएँ।
बाटोमा देवीलाई देखें। रिस र आवेग पनि थियो।
मेरो मुखको नजिकै आफ्नो मुख ल्याइन्। म पर सरें। दिउँसै के गरेको भन्न लागेको थिए।
देवीबाट तुरुन्त उत्तर आयो, ‘बुढो बधाई ! यसपालि हजुरको मुखबाट रक्सीको गन्ध होइन। मायाको बास्ना आएको छ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ १२:१० बुधबार